Xogta shirka golaha wada-tashiga ee Xamar ka socda - Caasimada Online
Home Warar Xogta shirka golaha wada-tashiga ee Xamar ka socda
Xogta shirka golaha wada-tashiga ee Xamar ka socda
Muqdisho (Caasimada Online) – Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxaa ka socda shirka Golaha Wadatashiga Qaranka, kaas oo galay maalintiisii labaad.
Shirkan oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa guddoominayo Madaxweynaha Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana goobjoog ah 5-ta Madaxweyne Goboleed ee dalka, ra’iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo duqa magaalada Muqdisho.
Wararka ayaa sheegaya in shirka maanta lasoo gabagabeyn doono, iyada oo laga soo saari doono war-murtiyeed ku aadabn waxyaabaha ay ka wada-hadleen madaxda qaranka.
Sidoo kale wararka ayaa intaasi kusii daraya in shirka maanta diirradda lagu saari doono arrimo ay ka mid yihiin dhammeystirka dastuurka, xoojinta nidaamka federaalka, adkeynta amniga dalka, dhisida garsoor sal adag leh, xal u helidda arrimaha abaaraha iyo diyaarinta hannaanka doorashooyinka dalka.
Golaha ayaa sidoo kale warbixin ku aadan xaaladda abaaraha ka dhegeystay ergayga gaarka ah ee madaxweynaha u qaabilsan abaaraha, C/raxmaan Cabdishakuur Warsame.
Madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayaa dhammaantood ku sugan caasimada oo ay uga qayb-galeen caleema saarka madaxweynaha oo la qabtay Khamiistii lasoo dhaafay.
Shirkan ayaa noqonayo kii labaad oo uu si toos ah ula yeelanayo Madaxweynaha cusub, hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyada, kadib doorashadii dhacday 15-kii May.
Si kastaba, xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa ah mid deggan, waxaana isha lagu hayaa dhismaha dowladda cusub oo uu ugu horreeyo magacaabista ra’iisul wasaaraha.